08 | juillet | 2021 | InfoKmada
Accueil 2021 juillet 8
Archives quotidiennes: 8 juillet 2021
Madagasikara: hahaleo tena ara-bary amin’ny 2023
InfoKmada - 8 juillet 2021 0
Tratra ny tanjona ary hahaleo tena ara-bary i Madagasikara amin’ny taona 2023. Na izany aza, ilaina ny fijerena akaiky amin’ny famahana ny olan’ireo tantsaha eo amin’ny seha-pamokaram-bary hoy ny tompon’andraikitra. Ny 15 % ny vary izay very noho ny tsy fahaizana mikarakara, indrindra eo amin’ny fotoam-piotazana mandrapahatonga azy any an-tsompitra.
Tsy fananan’asa : 27% n’ireo amin’ny sehetra tsy ara-dalàna no very asa ny taona 2020
Efa tafiditra ao antin’ny « récession économique » na ny fitotonganan’ny toekarena ao anatin’ny fotoana haingana i Madagasikara amin’izao. Raha ny teo amin’ny sehatra tsy manara-dalàna ohatra, ny taona 2020, 27% n’ireo miasa amin’izay no very asa nohon’ny valan’aretina Covid-19. Misy fiatraikany betsaka amin’ny toekarena izany ka mila mandray fepetra amin’ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ny fanjakana.
EPS – Baccalauréat : mpiadina manodidina ny 10 hatreto no hita fa nitondra vohoka
Mpiadina manodidina ny 10 no fantatra fa nitondra vohoka tamin’ireo izay hanao ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an’ny Kilasy famaranana izay notontosaina teny amin’ny kianjan’Alarobia. Vokatry ny krizy ara-pahasalamana, nihena ihany koa ny « performance » an’ireo mpiadina hoy ny tomponandraikitra.
Lalàna mifehy ny toaka gasy : ny Solombavambahoaka no tompon’ny teny farany
Misy ambadika politika avo lenta hoy ny Solombavambahoaka RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle no fitsipahan’ireo loholona ilay lalàna mifehy ny toaka gasy teny anivon’ny Antenimierampirenena. Na notsipahan’izy ireo aza izany, ireo Solombavambahoaka no tompon’ny teny farany amin’ny fandaniana ity lalàna ity.
Kere-Faritra Atsimo : nanao antso fanairana ny sekretera jereralin’ny ONU
Nanamafy ny antso fanairana manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo misy any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara nohon’ny haintany ateraky ny fihovaovan’ny toetr’andro ny sekretera jereralin’i firenena Mikambana Antonio Guterres. Maherin’ny 1,14 tapitr’isan’ireo mponina any an-toerana no voakasiky ny tsy fanjarian-tsakafo ankehitriny raha ny antotan’isa navokan’ny teo anivon’i PAM.
Guichet unique : nitombo avo roa heny ny olona maka « certificat de situation juridique »
Nanamora ny fikarakarana taratasin-tany ny fisian’ny guichet unique ho an’Antananarivo Atsimondrano. Tao anatin’ny herintaona, nitombo avo roa heny ny olona maka ny certificat juridique eo amin’ny sampandraharahan’ny fananantany.